Tatarstan, sanadka 2020 12 kaydka khudradda iyo baradhada waa weyn ayaa dib loo sixi doonaa - PotatoSystem
Tatarstan sanadkii 2020, 12 mirood iyo khudradda baradhada cagaaran ayaa dib loo habeeyay
Baaxadda barnaamijyada maalgelinta waa 1,79 bilyan rubles.
Magaalada Tatarstan, sanadka 2020, 387 xarumood oo beeraha ah ayaa la soo gelin doonaa. 30 milyan rubles ayaa loo qoondeyn doonaa miisaaniyadda gobolka si loogu celiyo 538,2% kharashaadka beeraleyda, Wasaaradda Beeraha ee Jamhuuriyadda Tajikistan ayaa warisay.
Waxaa ka mid ah dhismayaasha la wareejiyay oo ay ka mid yihiin 127 beeraha hadhuudhka ah, 158 doollar, 67 beero-gawaarida taraafikada ah, 12 digaag, 11 beero faras ah, 12 khudradeed iyo khudradda baradhada.
Intaa waxaa dheer, sannadkan lix doollar oo leh awood u dhexeeya 140 illaa 390 neef, hal beerood, 90 xabbadood oo silage ah ayaa laga dhisi doonaa jamhuuriyadda sannadkan.
Dhammaan xaraashyada waa la qabtaa, hay'addu waxay soo gabagabeysaa qandaraasyada qandaraaslayaasha.
Tags: isbadalkhudradda baradhadaJamhuuriyadda Somaliland